Weerar Lagu Qaaday Saldhig Ciidamada Dowladda Ku Leeyihiin Owdheegle – Goobjoog News
Xubno ka tirsan Alshabaab ayaa barqadii maanta waxaa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin degmada Owdhiigle ee gobalka Shabeelllaha Hoose.
Weerarka oo ku bilaawday Qarax gaari oo ay fuliyeen naftood hurayaal ayaa waxaa xigay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda ee ku sugnaa goobta iyo qolyihii weerarka soo qaad.
Dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare isgu jira dhaawac iyo dhimasho, in kastoo aan la helin tirade saxda ah ee wax ku noqotay Qaraxa iyo weerarka maanta ka dhacay degmada Owdheegle.
Sidoo kale taliyaha ciidanka luqta general Yuusuf Raage Odawaa oo lahadlay Warbaahinta Dowladda ayaa sheegay in degmada Owdheegle yaallaan hadda meydadka raggii weerarka soo qaaday kuwaas oo aan xisaab laheyn waa sida uu hadalka u dhigay.
Dhaka kale Alshabaab ayaa sheegtay weererka ka dhacay Owdheegle, war qoraal ah ay ku soo dhigeen barahooda ayeey ku sheegay in laba Qarax ay ku weerareen goobta khasaare badan ay ku gaarsiiyeen ciidamadii ku sugnaa saldhigga uu weerarku ka dhacay.
Dhageyso: Tababaro La Siinayo Shaqaalaha Wasaaradaha Hirshabelle
Maamulka Jubbaland Oo Guul Ka Sheegtay Dagaallo Ka Dhacay Gedo
Cialis low cost cialis 5 mg cialis coupon printable
Authentioc Brand Viagra Keflex In Geriatrics Cialis Moyens De Durer Plus Longtemps Cialis Generika Unterschied
Bentyl Merbentyl [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Clomid Culturiste Buy Cialis Viagra Als Droge
Hcdlfa kuzpig Viagra best buy cialis 5mg price
Gpsaaw hjqvsm cialis on line cialis price walgreens
Kiikzv oszvvx order generic viagra online cialis price walgreens
Meyjem hkerxn Discount viagra online how much is cialis
Leave a Reply to Waynerat Cancel reply
Xeebta Liido Iyo Taalada Daljirka Daahsoon Ee Muqdisho Oo Mashquul Ah
Ueblnl ifmlhz cialis online generic for cialis...
Tyelhs jqxksm buying generic viagra order cialis online...
Qkaqhp xxvijz lowest price on generic viagra online cialis...
Qxgdin gcoxqf ed pills cost of cialis...
Kkduih oatbsi Sale viagra cialis 5mg price...